ဆောငျးပါး | လာမယျ့ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျကို ပွနျစိနျချေါဖို့ မနျစီးတီးရဲ့ အနအေထား - Sports Home Time
ဆောငျးပါး | လာမယျ့ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျကို ပွနျစိနျချေါဖို့ မနျစီးတီးရဲ့ အနအေထား
UNICODE – “ နောကျရာသီက ဒီကနမှေ့ာ စတငျခဲ့ပါပွီ ” ဆိုတဲ့ စကားက မနျစီးတီးက လီဗာပူးကို ၄-၀ နဲ့ အနိုငျရတဲ့နောကျ တိုကျစဈသမား စတာလငျ ပွောဆိုခဲ့တာပါ။
ဘောလုံးကမ်ဘာကွီးက ရပျနမှော မဟုတျပါဘူး။ ဒီတော့ မနျစီးတီးကလညျး ရှဆေ့ကျသှားရမှာဖွဈပွီး ဒီအတှကျ ကစားသမား ချေါယူမှုတှေ ဆကျလုပျသှားမှာပါ။ မနျစီးတီးကို ဘယျလို ကစားသမားတှေ ရောကျလာမှာလဲ?
လာမယျ့ရာသီမှာ မနျစီးတီးက ဆုဖလားတှကေို ပွနျလညျစိနျချေါနိုငျဦးမယျလို့ ကစားသမားတှဘေကျက ခံစားနရေပါလိမျ့မယျ။ လီဗာပူးက အောငျပှဲခံမှုမှာ အရှိနျလှနျပွီး အမူးမပွသေေးတာ ဖွဈနိုငျပမေယျ့ အီသီဟတျက ပှဲမှာတော့ မနျစီးတီးက လီဗာပူးကို ကြျောလှနျနိုငျတဲ့ အငျအား ရှိနဆေဲဆိုတာ ပွသခဲ့တာဖွဈတယျ။ လီဗာပူးကို ကြျောလှနျဖို့ တောငျ့တငျးနဆေဲလညျး ဖွဈပါတယျ။
ပှဲအပွီးမှာ ယာဂငျကလော့ပျက ၅-၃ လောကျနဲ့ ရှူံးခဲ့ရငျတောငျ သူပို နှဈသကျဦးမယျလို့ ပွောပါတယျ။ လီဗာပူးက အခှငျ့အရေး မရခဲ့တာ မဟုတျပါဘူး။ အသုံးမခနြိုငျခဲ့တာတငျ ဖွဈတယျ။ အခွားတဈဘကျမှာ မနျစီးတီးကလညျး သိပျကောငျးခဲ့ပါတယျ။
ဖီးဖိုဒနျဟာ အခွားသူတှထေကျ ပှဲထှကျခှငျ့တှေ ပိုရလာတော့မယျ့သူပါ။ ပှဲကွီးတှအေတှကျ ပှဲကွို အစီအစဉျတှေ ခမြှတျဖို့ ကွိုးစားရတော့မယျ့ ဂှာဒီယိုလာဟာ ဖိုဒနျကို အဆိုပါ ပှဲတှမှော ထညျ့သုံးဖို့ စဉျးစားနမှောပါ။ ဖိုဒနျက သှငျးဂိုး ခွိမျးခွောကျမှုတှမှော ဘောလုံးဉာဏျ သိပျကောငျးမှနျတယျ။ အသကျ ၂၀ အရှယျပဲ ရှိသေးပမေယျ့ အသငျးလိုကျ ခြိတျဆကျမှုမှာ ကောငျးတယျ၊ ဆကျပွီးလညျး တိုးတကျလာနတေယျ။ သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုး နောကျပွီး လကျထိတာကွောငျ့ ပယျဖကျြလိုကျရတဲ့ ပဉ်စမမွောကျ သှငျးဂိုးတှမှော သူဘာကို လုပျနိုငျလဲဆိုတာ ပွသခဲ့တယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ အကောငျးဆုံး ကစားသမားအဖွဈ ရှိနဆေဲ ဒီဘရိုငျးက ဒီရာသီမှာ ဂိုးထောကျပံ့မှု ၁၇ ကွိမျ လုပျထားနိုငျပွီး သီယာရီ အှနျနရီရဲ့ တဈရာသီ ဂိုးထောကျပံ့မှု ၂၀ ကို ကြျောလှနျဖို့ အလားအလာ ကောငျးနသေူပါ။ သူ့နောကျမှာ ရိုဒရီနဲ့ ဂျေါဒိုဂနျတို့က မနျစီးတီးအတှကျ တဈပှဲလုံး ပွေးလှားပေးဖို့ ရှိနတေယျ။ ဒီအစုအဖှဲ့ဟာ ဘာနဗြေူးမှာ ရီးရဲလျမကျဒရဈကို အနိုငျယူပွခဲ့ပါတယျ။ သူတို့က လီဗာပူးကိုလညျး ကိုငျတှယျပွခဲ့တယျ။
ခံစဈမှာတော့ လာပျေါတေးက အားလုံးကို ရပျတနျ့ပွခဲ့တယျ။ မနျဒီကလညျး အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးတှေ ရနရေငျ ထိပျတနျးဖွဈသလို ဝျေါကာကလညျး ကစားနိုငျဆဲပါ။ ဂါစီယာက အခုမှ ၁၉ နှဈပဲ ရှိသေးပမေယျ့ သူ့ရဲ့ တောကျပမှုက သိပျကောငျးပါတယျ။ စတာလငျကတော့ အသငျးဟောငျးကို ရငျဆိုငျရာမှာ လြှပျစီးလို ကစားသမား ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
တဈခုတညျးသော စိုးရိမျစရာက ဂြီးဆုပါပဲ။ သူ့က ဘောလုံးပှဲတှေ ပွနျစတငျကတညျးက ပုံစံကောငျးတှေ မရသေးပါဘူး။ ခွစှေမျး မတညျငွိမျဘူး။ ဒါက လာမယျ့ရာသီအတှကျ သတိပွုစရာ ဖွဈလာပါတယျ။ လီဗာပူးနဲ့ မိနဈ ၉၀ ကစားခဲ့တဲ့ ခွစှေမျးအရတော့ မနျစီးတီးက လာမယျ့ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို စိနျချေါဖို့ စှမျးဆောငျရညျနဲ့ လူစာရငျး ရှိနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လို့ ဖွရှေငျးစရာတှလေညျး ရှိနပေါသေးတယျ။ လီဗာပူးနဲ့ပှဲမှာ မသိလိုကျရတဲ့ ကိစ်စတှေ အမြားကွီးပါ။ မနျစီးတီးက အားနညျးခကျြတှလေညျး ရှိနသေေးတယျ။ တကယျတမျးတော့ လီဗာပူးက ခနျြပီယံဖွဈနခေဲ့ပွီးပါပွီ။ ဒါကို အရငျလတှထေဲက သိကွပါတယျ။ ဒီတော့ ရလဒျမလိုတော့တဲ့ သူတို့ကို ရငျဆိုငျရာမှာ မနျစီးတီးက ကိုယျရဲ့ အားနညျးခကျြ အားလုံးကို မွငျခှငျ့မရခဲ့ပါဘူး။
အားကစားခုံရုံးရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကလညျး အရေးပါသှားမှာပါ။ သူတို့က စီးတီးကို ဘမျးမလား? ထှကျပျေါလာတဲ့ ရလဒျက လာမယျ့ရာသီ ဈေးကှကျထဲကို ဝငျဖို့ကို သကျရောကျမှု ရှိမှာလား?
အခြို့သော ဆုံးဖွတျခကျြတှကေ မသိနိုငျသေးပါဘူး။ နောကျထပျ ဇှနျလ အရောကျမှာ ဂှာဒီယိုလာကကော မနျစီးတီးမှာ ဆကျရှိနမှောလား? ဆိုတာကလညျး မေးခှနျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
လာမယျ့ရာသီ မနျစီးတီး ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျခှငျ့ မရရငျတောငျမှပဲ ထိပျတနျး ကစားသမားတှကေို ချေါယူနိုငျဦးမယျလို့ အသငျးက ယုံကွညျထားပါတယျ။ ဒီတော့ အားဖွညျ့မှုတှေ ရှိလာနိုငျတယျ။ အပွောငျးအရှေ့ ကိစ်စတှကေ ကစားသမား ရှငျးထုတျမှုတှနေဲ့အတူ အပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈလာနိုငျဆဲဖွဈပါတယျ။
ဥပမာပွောရရငျ – မနျစီးတီးက အသငျ့သုံးနိုငျတဲ့ ဗဟိုခံစဈမှူးကို ချေါယူပွီး အသငျးကို တိုကျရိုကျ သကျရောကျမှု ရှိဖို့ ကွိုးစားခငျြတယျ။ အဲ့အတှကျ နာပိုလီက ကူလီဘာလကေို ခြိတျဆကျထားတယျ။ ပုဂ်ဂိုလျရေး သဘောတူညီမှု ရထားပွီဖွဈပမေယျ့ နာပိုလီက အတညျမပွုပေးသေးဘူး။ ဒါက မနှဈတုနျးက မကျဂှဲရားတုနျးကလို အခွအေနပေါပဲ။ နာပိုလီက ကူလီဘာလအေတှကျ အစားထိုးစရာကို ရှာဖှနေပေါတယျ။
အခွားသော တိုးတကျမှုတှကေိုလညျး အခွခေံပါတယျ။ ဂြှနျစတုနျးရဲ့ အနာဂတျ အပါအဝငျပေါ့။ ကူလီဘာလအေပွငျ ဘုနျးမောကျက အကီကလညျး အားကောငျးတဲ့ ရှေးခယျြမှု ဖွဈထားခဲ့တယျ။ နောကျပွီး သူက ပရီးမီးယားလိဂျ စညျးမဉျြးအရ homegrown ကစားသမားဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျကပဲ သတငျးထောကျ David Ornstein က အတညျပွုပါတယျ။ မနျစီးတီးက ဘယျခွမျးခံစဈသမားတှအေဖွဈ ကူလီဘာလနေဲ့ အကီအပွငျ ဒေါ့မှနျက Dan-Axel Zagadou ကိုလညျး စိတျဝငျစားပါတယျ။ နောကျပွီး ဆာနေးနရော အစားထိုးဖို့နဲ့ တိုကျစဈမှူးနရောတှအေတှကျလညျး အစီအစဉျတှေ ရှိနပေါတယျ။ အခွအေနတှေကေ နှမှေ ပိုသခြော သိရပါမယျ။
မနျစီးတီးရဲ့ တိုးတကျမှုက အပွောငျးအရှေ့ ဈေးကှကျမှာပဲ မူတညျနတော မဟုတျပါဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီ ပွနျပွီး စတငျလာကတညျး စီးတီးက ကစားပုံ သိပျကောငျးနပေါတယျ။ ခယျြဆီးနဲ့ပှဲမှာတော့ ရှူံးခဲ့တယျ။ အကျဖျအနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျတှေ ယှဉျပွိုငျရဦးမှာဖွဈပွီး ဖဖေျောဝါရီတုနျးက ဘာနဗြေူးမှာ တောကျပခဲ့သလို ရီးရဲလျမကျဒရဈကို အကောငျးဆုံး ယှဉျပွိုငျဖို့ လိုပါတယျ။
အဂှယျရို ခတျေလှနျ၊ ဂှာဒီယိုလာ ခတျေလှနျတှကေို စကားပွောနတောထကျ ဒီရာသီကိုပဲ အဓိက ယှဉျပွိုငျရဦးမှာပါ။ ဆာနေး ထှကျခှာသှားမှုနဲ့ ဘယျအစှနျပိုငျးတှကေို သတိထားဖို့ လိုပါတယျ။ ခံစဈပွဿနာက မနျစီးတီးကို ထိခိုကျမှု ကွီးစခေဲ့ပါတယျ။ စိတျဓါတျပိုငျးဆိုငျရာ ပူးပေါငျးမှုမှာ အားနညျးခွငျးက ပှဲပေါငျးမြားစှာမှာ မနျစီးတီးကို အရေးနိမျ့စခေဲ့တယျ။
စတာလငျနဲ့ ဘာနာတိုဟာ အရငျနှဈက သူတို့ ပွသထားတဲ့ ခွစှေမျးတှေ မပွနိုငျပါဘူး။ အဂှယျရိုနဲ့ မာရကျဈက မနှဈကအတိုငျး စှမျးဆောငျထားနိုငျပွီး ဒီဘရိုငျးက ပိုကောငျးလာတယျ။ ဝျေါကာက အရေးပါနဆေဲဖွဈပွီး လာပျေါတေးက ဒဏျရာက ပွနျသကျသာလာပါပွီ။ ပွနျကစားခှငျ့ရပွီး နောကျပိုငျး ကစားခှငျ့ရထားတဲ့ လေးပှဲမှာ ဖိုဒနျက အဆငျသငျ့ ဖွဈနပွေီဆိုတာ ပွသခဲ့တယျ။ ဂါစီယာကလညျး ဘာအမှားမှကို မရှိအောငျကို ကောငျးထားတယျလို့ ဂှာဒီယိုလာက ပွောပါတယျ။
ရိုဒီရီကလညျး အတှအေ့ကွုံရလာပွီး ပိုကောငျးလာတယျ။ ဂှာဒီယိုလာအကွိုကျ ကှငျးလယျလူ ဂျေါဒိုဂနျကလညျး ကှငျးလယျမှာ ခွစှေမျးပွနတေယျ။ ကနျဆယျလို၊ ဇငျခနျြကို၊ မနျဒီတို့ကလညျး ဝျေါကာနဲ့အတူ အစှနျနရောတှမှော အပွိုငျဖွဈနတေယျ။ ဂြီးဆုကလညျး ရုနျးကနျနရေပမေယျ့ ဒီရာသီ ၁၈ ဂိုး သှငျးထားပါတယျ။
အားလုံကို ခွုံကွညျမယျဆိုရငျ သိပျတော့လညျး အဆိုးကွီး မဟုတျပါဘူး။
ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို စိနျချေါနိုငျတဲ့ အခွခေံ အုတျမွဈတှကေ ရှိနဆေဲပါ။ လီဗာပူးကကော ဘယျလို နမေလဲ? ခနျြပီယံဘှဲ့ကို ခုခံရမယျ့ သူတို့က တူညီတဲ့ စိတျပွငျးပွမှုတှေ ရှိဦးမလား မသိနိုငျပါဘူး။ ဒီတော့ စီးတီးက ကိုယျဘာသာ အာရုံစိုကျရမယျ။
မနျစီးတီးရဲ့ လမျးကွောငျး အားလုံးက ပနျးခငျးလမျးတော့ ဖွဈမှာ မဟုတျပါဘူး။ အားကစားခုံရုံးရဲ့ ပွဈဒဏျက အသငျးကို ထိုးနှကျနိုငျတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျကလညျး ဆကျပွီး အပွဈပေးမယျဆိုရငျ မနျစီးတီး တောကျပခှငျ့ ထပျရဖို့ အခကျအခဲ ဖွဈသှားနိုငျတယျ။
ဒီမနကျထိတော့ အခွအေနတှေကေ ကောငျးပါတယျ။ လူစာရငျးက တောငျ့တငျးနဆေဲ၊ ဂှာဒီယိုလာလညျး ရှိနဆေဲပါ။ အကယျလို့ ခနျြပီယံလိဂျကို မကစားရရငျလညျး ပရီးမီးယားလိဂျကို ပွနျလညျ စိနျချေါဖို့ ပိုမို ပွငျဆငျခှငျ့ရှိမှာဖွဈတယျ။ ပိုကောငျးတဲ့ ပွငျဆငျမှုတှအေတှကျ ကွားရကျတှမှော ပှဲမကစားရတော့တာမြိုးပေါ့။
ခနျြပီယံလိဂျ ကစားရမလား မကစားရဘူးလားတော့ မသိနိုငျသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လာမယျ့ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျကို စိနျချေါဖို့ မနျစီးတီးက အတောငျ့တငျးဆုံးအသငျး ဖွဈနဆေဲပါပဲ။
(The Athletic မှ မနျစီးတီးဆောငျးပါးရှငျး Sam Lee ရဲ့ သုံးသပျမှုကို ဆီလြျောအောငျ ပွနျလညျ ရေးသားပါသညျ။)
ZAWGYI – “ နောက်ရာသီက ဒီကနေ့မှာ စတင်ခဲ့ပါပြီ ” ဆိုတဲ့ စကားက မန်စီးတီးက လီဗာပူးကို ၄-၀ နဲ့ အနိုင်ရတဲ့နောက် တိုက်စစ်သမား စတာလင် ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ဘောလုံးကမ္ဘာကြီးက ရပ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ မန်စီးတီးကလည်း ရှေ့ဆက်သွားရမှာဖြစ်ပြီး ဒီအတွက် ကစားသမား ခေါ်ယူမှုတွေ ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ မန်စီးတီးကို ဘယ်လို ကစားသမားတွေ ရောက်လာမှာလဲ?
လာမယ့်ရာသီမှာ မန်စီးတီးက ဆုဖလားတွေကို ပြန်လည်စိန်ခေါ်နိုင်ဦးမယ်လို့ ကစားသမားတွေဘက်က ခံစားနေရပါလိမ့်မယ်။ လီဗာပူးက အောင်ပွဲခံမှုမှာ အရှိန်လွန်ပြီး အမူးမပြေသေးတာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အီသီဟတ်က ပွဲမှာတော့ မန်စီးတီးက လီဗာပူးကို ကျော်လွန်နိုင်တဲ့ အင်အား ရှိနေဆဲဆိုတာ ပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်။ လီဗာပူးကို ကျော်လွန်ဖို့ တောင့်တင်းနေဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲအပြီးမှာ ယာဂင်ကလော့ပ်က ၅-၃ လောက်နဲ့ ရှူံးခဲ့ရင်တောင် သူပို နှစ်သက်ဦးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လီဗာပူးက အခွင့်အရေး မရခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးမချနိုင်ခဲ့တာတင် ဖြစ်တယ်။ အခြားတစ်ဘက်မှာ မန်စီးတီးကလည်း သိပ်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဖီးဖိုဒန်ဟာ အခြားသူတွေထက် ပွဲထွက်ခွင့်တွေ ပိုရလာတော့မယ့်သူပါ။ ပွဲကြီးတွေအတွက် ပွဲကြို အစီအစဉ်တွေ ချမှတ်ဖို့ ကြိုးစားရတော့မယ့် ဂွာဒီယိုလာဟာ ဖိုဒန်ကို အဆိုပါ ပွဲတွေမှာ ထည့်သုံးဖို့ စဉ်းစားနေမှာပါ။ ဖိုဒန်က သွင်းဂိုး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေမှာ ဘောလုံးဥာဏ် သိပ်ကောင်းမွန်တယ်။ အသက် ၂၀ အရွယ်ပဲ ရှိသေးပေမယ့် အသင်းလိုက် ချိတ်ဆက်မှုမှာ ကောင်းတယ်၊ ဆက်ပြီးလည်း တိုးတက်လာနေတယ်။ သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုး နောက်ပြီး လက်ထိတာကြောင့် ပယ်ဖျက်လိုက်ရတဲ့ ပဉ္စမမြောက် သွင်းဂိုးတွေမှာ သူဘာကို လုပ်နိုင်လဲဆိုတာ ပြသခဲ့တယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် အကောင်းဆုံး ကစားသမားအဖြစ် ရှိနေဆဲ ဒီဘရိုင်းက ဒီရာသီမှာ ဂိုးထောက်ပံ့မှု ၁၇ ကြိမ် လုပ်ထားနိုင်ပြီး သီယာရီ အွန်နရီရဲ့ တစ်ရာသီ ဂိုးထောက်ပံ့မှု ၂၀ ကို ကျော်လွန်ဖို့ အလားအလာ ကောင်းနေသူပါ။ သူ့နောက်မှာ ရိုဒရီနဲ့ ဂေါ်ဒိုဂန်တို့က မန်စီးတီးအတွက် တစ်ပွဲလုံး ပြေးလွှားပေးဖို့ ရှိနေတယ်။ ဒီအစုအဖွဲ့ဟာ ဘာနေဗျူးမှာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို အနိုင်ယူပြခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က လီဗာပူးကိုလည်း ကိုင်တွယ်ပြခဲ့တယ်။
ခံစစ်မှာတော့ လာပေါ်တေးက အားလုံးကို ရပ်တန့်ပြခဲ့တယ်။ မန်ဒီကလည်း အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းတွေ ရနေရင် ထိပ်တန်းဖြစ်သလို ဝေါ်ကာကလည်း ကစားနိုင်ဆဲပါ။ ဂါစီယာက အခုမှ ၁၉ နှစ်ပဲ ရှိသေးပေမယ့် သူ့ရဲ့ တောက်ပမှုက သိပ်ကောင်းပါတယ်။ စတာလင်ကတော့ အသင်းဟောင်းကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ လျှပ်စီးလို ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခုတည်းသော စိုးရိမ်စရာက ဂျီးဆုပါပဲ။ သူ့က ဘောလုံးပွဲတွေ ပြန်စတင်ကတည်းက ပုံစံကောင်းတွေ မရသေးပါဘူး။ ခြေစွမ်း မတည်ငြိမ်ဘူး။ ဒါက လာမယ့်ရာသီအတွက် သတိပြုစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ လီဗာပူးနဲ့ မိနစ် ၉၀ ကစားခဲ့တဲ့ ခြေစွမ်းအရတော့ မန်စီးတီးက လာမယ့်ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို စိန်ခေါ်ဖို့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လူစာရင်း ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ ဖြေရှင်းစရာတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာ မသိလိုက်ရတဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီးပါ။ မန်စီးတီးက အားနည်းချက်တွေလည်း ရှိနေသေးတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ လီဗာပူးက ချန်ပီယံဖြစ်နေခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကို အရင်လတွေထဲက သိကြပါတယ်။ ဒီတော့ ရလဒ်မလိုတော့တဲ့ သူတို့ကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ မန်စီးတီးက ကိုယ်ရဲ့ အားနည်းချက် အားလုံးကို မြင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
အားကစားခုံရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်း အရေးပါသွားမှာပါ။ သူတို့က စီးတီးကို ဘမ်းမလား? ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်က လာမယ့်ရာသီ ဈေးကွက်ထဲကို ဝင်ဖို့ကို သက်ရောက်မှု ရှိမှာလား?
အချို့သော ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက မသိနိုင်သေးပါဘူး။ နောက်ထပ် ဇွန်လ အရောက်မှာ ဂွာဒီယိုလာကကော မန်စီးတီးမှာ ဆက်ရှိနေမှာလား? ဆိုတာကလည်း မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့်ရာသီ မန်စီးတီး ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် မရရင်တောင်မှပဲ ထိပ်တန်း ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူနိုင်ဦးမယ်လို့ အသင်းက ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ အားဖြည့်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စတွေက ကစားသမား ရှင်းထုတ်မှုတွေနဲ့အတူ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာပြောရရင် – မန်စီးတီးက အသင့်သုံးနိုင်တဲ့ ဗဟိုခံစစ်မှူးကို ခေါ်ယူပြီး အသင်းကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှု ရှိဖို့ ကြိုးစားချင်တယ်။ အဲ့အတွက် နာပိုလီက ကူလီဘာလေကို ချိတ်ဆက်ထားတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သဘောတူညီမှု ရထားပြီဖြစ်ပေမယ့် နာပိုလီက အတည်မပြုပေးသေးဘူး။ ဒါက မနှစ်တုန်းက မက်ဂွဲရားတုန်းကလို အခြေအနေပါပဲ။ နာပိုလီက ကူလီဘာလေအတွက် အစားထိုးစရာကို ရှာဖွေနေပါတယ်။
အခြားသော တိုးတက်မှုတွေကိုလည်း အခြေခံပါတယ်။ ဂျွန်စတုန်းရဲ့ အနာဂတ် အပါအဝင်ပေါ့။ ကူလီဘာလေအပြင် ဘုန်းမောက်က အကီကလည်း အားကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ထားခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး သူက ပရီးမီးယားလိဂ် စည်းမျဉ်းအရ homegrown ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကပဲ သတင်းထောက် David Ornstein က အတည်ပြုပါတယ်။ မန်စီးတီးက ဘယ်ခြမ်းခံစစ်သမားတွေအဖြစ် ကူလီဘာလေနဲ့ အကီအပြင် ဒေါ့မွန်က Dan-Axel Zagadou ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆာနေးနေရာ အစားထိုးဖို့နဲ့ တိုက်စစ်မှူးနေရာတွေအတွက်လည်း အစီအစဉ်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အခြေအနေတွေက နွေမှ ပိုသေချာ သိရပါမယ်။
မန်စီးတီးရဲ့ တိုးတက်မှုက အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက်မှာပဲ မူတည်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီ ပြန်ပြီး စတင်လာကတည်း စီးတီးက ကစားပုံ သိပ်ကောင်းနေပါတယ်။ ချယ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာတော့ ရှူံးခဲ့တယ်။ အက်ဖ်အေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်တွေ ယှဉ်ပြိုင်ရဦးမှာဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီတုန်းက ဘာနေဗျူးမှာ တောက်ပခဲ့သလို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
အဂွယ်ရို ခေတ်လွန်၊ ဂွာဒီယိုလာ ခေတ်လွန်တွေကို စကားပြောနေတာထက် ဒီရာသီကိုပဲ အဓိက ယှဉ်ပြိုင်ရဦးမှာပါ။ ဆာနေး ထွက်ခွာသွားမှုနဲ့ ဘယ်အစွန်ပိုင်းတွေကို သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ခံစစ်ပြဿနာက မန်စီးတီးကို ထိခိုက်မှု ကြီးစေခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းမှုမှာ အားနည်းခြင်းက ပွဲပေါင်းများစွာမှာ မန်စီးတီးကို အရေးနိမ့်စေခဲ့တယ်။
စတာလင်နဲ့ ဘာနာတိုဟာ အရင်နှစ်က သူတို့ ပြသထားတဲ့ ခြေစွမ်းတွေ မပြနိုင်ပါဘူး။ အဂွယ်ရိုနဲ့ မာရက်စ်က မနှစ်ကအတိုင်း စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ပြီး ဒီဘရိုင်းက ပိုကောင်းလာတယ်။ ဝေါ်ကာက အရေးပါနေဆဲဖြစ်ပြီး လာပေါ်တေးက ဒဏ်ရာက ပြန်သက်သာလာပါပြီ။ ပြန်ကစားခွင့်ရပြီး နောက်ပိုင်း ကစားခွင့်ရထားတဲ့ လေးပွဲမှာ ဖိုဒန်က အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ပြသခဲ့တယ်။ ဂါစီယာကလည်း ဘာအမှားမှကို မရှိအောင်ကို ကောင်းထားတယ်လို့ ဂွာဒီယိုလာက ပြောပါတယ်။
ရိုဒီရီကလည်း အတွေ့အကြုံရလာပြီး ပိုကောင်းလာတယ်။ ဂွာဒီယိုလာအကြိုက် ကွင်းလယ်လူ ဂေါ်ဒိုဂန်ကလည်း ကွင်းလယ်မှာ ခြေစွမ်းပြနေတယ်။ ကန်ဆယ်လို၊ ဇင်ချန်ကို၊ မန်ဒီတို့ကလည်း ဝေါ်ကာနဲ့အတူ အစွန်နေရာတွေမှာ အပြိုင်ဖြစ်နေတယ်။ ဂျီးဆုကလည်း ရုန်းကန်နေရပေမယ့် ဒီရာသီ ၁၈ ဂိုး သွင်းထားပါတယ်။
အားလုံကို ခြုံကြည်မယ်ဆိုရင် သိပ်တော့လည်း အဆိုးကြီး မဟုတ်ပါဘူး။
ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်တွေက ရှိနေဆဲပါ။ လီဗာပူးကကော ဘယ်လို နေမလဲ? ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ခုခံရမယ့် သူတို့က တူညီတဲ့ စိတ်ပြင်းပြမှုတွေ ရှိဦးမလား မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ စီးတီးက ကိုယ်ဘာသာ အာရုံစိုက်ရမယ်။
မန်စီးတီးရဲ့ လမ်းကြောင်း အားလုံးက ပန်းခင်းလမ်းတော့ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားကစားခုံရုံးရဲ့ ပြစ်ဒဏ်က အသင်းကို ထိုးနှက်နိုင်တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလည်း ဆက်ပြီး အပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင် မန်စီးတီး တောက်ပခွင့် ထပ်ရဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ဒီမနက်ထိတော့ အခြေအနေတွေက ကောင်းပါတယ်။ လူစာရင်းက တောင့်တင်းနေဆဲ၊ ဂွာဒီယိုလာလည်း ရှိနေဆဲပါ။ အကယ်လို့ ချန်ပီယံလိဂ်ကို မကစားရရင်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြန်လည် စိန်ခေါ်ဖို့ ပိုမို ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက် ကြားရက်တွေမှာ ပွဲမကစားရတော့တာမျိုးပေါ့။
ချန်ပီယံလိဂ် ကစားရမလား မကစားရဘူးလားတော့ မသိနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လာမယ့်ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို စိန်ခေါ်ဖို့ မန်စီးတီးက အတောင့်တင်းဆုံးအသင်း ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။
(The Athletic မှ မန်စီးတီးဆောင်းပါးရှင်း Sam Lee ရဲ့ သုံးသပ်မှုကို ဆီလျော်အောင် ပြန်လည် ရေးသားပါသည်။)
ပရီးမီးယားလိဂျ ပွနျစိနျချေါခငျြရငျ ငှသေုံးဖို့ လိုကွောငျး ဘုတျအဖှဲ့အား အာတီတာ သတိပေး
ရာသီကုနျမှာ အဆငျ့ ၃ နရောမှာ ရပျတညျနိုငျလိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျနတေဲ့ ယူနိုကျတကျ